DEG DEG Wararkii ugu Dambeeyay Dagaalka Afgaanistaan iyo Taalibaan oo Ku dhawaaqaday in - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta DEG DEG Wararkii ugu Dambeeyay Dagaalka Afgaanistaan iyo Taalibaan oo Ku dhawaaqaday...
DEG DEG Wararkii ugu Dambeeyay Dagaalka Afgaanistaan iyo Taalibaan oo Ku dhawaaqaday in
Daalibaan waxay ballaarisay xiriirkii ay la lahayd saraakiishii hore iyo hoggaamiyeyaashii qabaa’ilka si ay u samayso dowlad la ballaariyay oo Afgaanistaan ​​ah, halka welwelka reer Galbeedka ee ku aaddan xaaladda bani’aadamnimo ee sii xumaaneysa iyo sii xumeynta dhibaatada qaxootiga ay sii korortay.
Sarkaal ka tirsan dhaqdhaqaaqa Daalibaan, Khalil Rahman Haqqani, ayaa sheegay in xarakadu la xiriirtay saraakiishii hore ee dowladdii waqtigeedu dhammaaday – oo dalka ka tagay – dib ugu noqoshada Afghanistan.
Hadalladii , Haqqani wuxuu intaas ku daray inay jiraan shirar, oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo dhab ah, oo dhammaan dhinacyadu ay soo dhisi doonaan dowlad la ballaariyay.
Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan xarakada ayaa sheegtay in maalmaha soo socda ay la kulmi doonaan guddoomiyayaashii hore ee gobolka iyo saraakiishii dadweynaha ee 20 gobol.
Waswaaska reer galbeedka
Dhanka kale, afhayeenka Aqalka Cad Jen Psaki ayaa sheegtay in madaxweyne Joe Biden uu kulan fool -ka -fool ah la yeelan doono hoggaamiyeyaasha Kooxda Toddoba berri oo Talaado ah, si uu ugala hadlo xaaladda Afghanistan.
Psaki ayaa intaas ku dartay in wadahadalada looga hadli doono sidii gargaar bani’aadannimo loo siin lahaa qaxootiga Afgaanistaan.
Raiisel wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson – oo haya jagada madaxtinimo ee kooxda – ayaa ku baaqay shir degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda Afghanistan.
Johnson wuxuu sheegay in beesha caalamku ay tahay inay hubiso daad -gureynta nabdoon, ka hortagto dhibaato bani’aadamnimo iyo inay taageerto dadka Afgaanistaan ​​si ay u sugaan waxa uu ugu yeeray guulaha 20 -kii sano ee la soo dhaafay.
Afhayeen u hadlay dawladda Ingiriiska ayaa sheegay in Johnson uu khadka telefoonka kagala hadlay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Afhayeenku wuxuu intaas ku daray in labada hoggaamiye ay muujiyeen aragti mideysan oo ah in dowlad kasta oo cusub ay tahay inay matasho dadka kala duwan ee reer Afgaanistaan, ayna ilaaliso xuquuqda haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay, iyo in Taalibaan lagu xukumi doono falalkooda, ee aan lagu xukumi doonin hadalkooda.
Wariyaha Al-Jazeera ee Turkiga ayaa sheegay in Erdogan uu tilmaamay intii uu wicitaanku socday in ahmiyadda Turkiga ee Afgaanistaan ​​ay tahay in muwaadiniinteeda laga soo daadgureeyo halkaas, ayna diyaar u yihiin inay sugaan ammaanka garoonka diyaaradaha ee Kabul haddii la helo xaalado ku habboon.
Madaxweynaha Turkiga ayaa carrabka ku adkeeyay in dhibaato weyn oo qaxootinimo ay lama huraan tahay haddii beesha caalamku aysan u dhaqaaqin inay taageerto Afghanistan iyo dalalka ku xeeran, gaar ahaan Iran.
Xaaladdan oo kale, Madaxweynaha Iiraan Ebrahim Raisi wuxuu sheegay in dalkiisu taageersan yahay in la helo xasillooni iyo nabad ka dhalata Afgaanistaan, oo reer Afgaanistaan ​​oo keliya ayaa go’aan ka gaari doona aayaha dalkooda.
Intii uu la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibadda Japan Toshimitsu Motegi, Raisi wuxuu intaas ku daray in joogitaanka Mareykanka ee Afgaanistaan ​​uu horseeday xasilloonida amniga iyo xasilloonida, Washington waxay qiratay in joogitaankeeda Afgaanistaan ​​ay ahayd qalad, dhowaanna ay ogaan doonto in joogitaankeeda dalal kale gobolkuna sidoo kale waa qalad.
Wasiirka arrimaha dibedda Japan ayaa goor sii horreysay Tehran kula kulmay dhiggiisa Iran Mohammad Javad Zarif, halkaas oo labada dhinac ay ka wada hadleen sidii loo soo nooleyn lahaa heshiiskii nukliyeerka Iiraan, xaaladda Afghanistan iyo xoojinta xiriirka labada dhinac.
Qoraal uu soo dhigay barta Twitter -ka kulanka kadib, Zarif wuxuu ku tilmaamay xaaladda Afgaanistaan ​​inay tahay masiibo, wuxuuna ku eedeeyay Mareykanka inay ka dambeyso.
Wariyaha Al-Jazeera ee Pakistan ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa baabuurta xamuulka ee xadka Torkham ee ka gudba xadka Afgaanistaan ​​uu caadi ku soo noqday, bil kadib markii mas’uuliyiinta Pakistan ay soo rogeen tallaabooyin lagu xaddidayo.
Geesta kale, Shirkadda Diyaaradaha ee Pakistan International Airlines ayaa ku dhawaaqday inay joojisay Duullimaadyadii ay ku tegi jireen Garoonka Diyaaradaha ee Kabul sababo dhinaca Ammaanka oo la xiriira xaalladda gudaha Garoonka, sida lagu sheegay Qoraalka Shirkadda.
Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay tirada qaxootiga Afgaanistaan ​​2.6 milyan, badankooduna waxay ku sugan yihiin dalalka deriska ah